Chakra waxay hoos u dhigeysaa taageerada i686 | Laga soo bilaabo Linux
Chakra, mid ka mid ah qaybinta ugu fiican pro KDE, hoos u dhig taageerada hawlwadeennada i686 (32 Bit), inaad diirada saarto dhamaan dadaaladaada processor-rada x86_64 (64 Xabo) kor u kaca awgood oo kan dambe suuqa ku jiro.
Sababtoo ah qaybinta sii kordheysa ee noocan ah processor-rada, waxaa jira tiro yar oo isticmaaleyaal ah (Imtixaanada) ka mid ah barahan loo isticmaalo 32 jajab, markaa taageerada ayaa ka sii dhib badan. Taasi waa sababta tallaabada xigta ee macquul ah ee isbeddelka ChakraMarka loo eego horumariyeyaasheeda, xaqiiqdii way ka tagaysaa barmaamijkan maaddaama qaybinta kale ay mas'uul ka yihiin taageeriddeeda.
Bilaha soo socda ee 2-3, isticmaalayaasha Chakra dhammaantood way heli doonaan hagaajinta cilladaha iyo cusboonaysiinta amniga. Intaas ka dib, meelaha keydka ah ee '686 'iyo muraayadaha muraayaddoodaba waa la hayn doonaa ilaa weligood, laakiin lama taageeri doono.
Waxaad ka arki kartaa qoraalka rasmiga ah (Ingiriisiga) cinwaanka xidhiidhkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Chakra waxay hoos u dhigtaa taageerada i686
Tan waxaan u arkaa inay tahay go'aan wanaagsan, maadaama aan ahay Chakra oo ah distoor aan lahayn dad badan 🙂
Waa hagaag waxaan u arkaa tan inay tahay go'aan gebi ahaanba khaldan.
Aynu wajahno, codsiyada 32-bit ah ayaa banaanka yaala oo waxay helayaan tijaabooyin badan oo dheeraad ah sidaa darteed waxay leeyihiin cayayaanka yar, halka 64-bit codsiyada ay ka badan yihiin "buggy."
Waxaan u maleynayaa in ka tagista 32bits aysan aheyn go'aan wanaagsan
Codsiyada 64-bit-ka ah ayaa "dhib badan" maxaa yeelay lama siinayo sida ugu badan ee ay u baahan yihiin, marka laga hadlayo meelaha loo yaqaan 'distros' ee bixiya noocyada labada qaab dhismeed. Dhinaca kale, haddii ay diiradda saaraan hal qaab dhismeed waxay si muuqata u wanaajin doontaa taageerada wax badan, qaybtana waxaan u maleynayaa inay si fiican u qabteen inay diiradda saaraan hal dhisme, maaddaama hadda dhammaan kombiyuutarada cusubi ay taageeraan.
Haa, dabcan, laakiin waxa Chakra go'aansatay waa wax culus, taasi waa ... sidaan u arko: «Haddii aad rabto inaad isticmaasho Chakra aad haysato in la isticmaalo 64bits daruuri. »
Sida iska cad taageeradu way fiicnaan doontaa, laakiin wali waa culeys aanan shaqsiyan jeclayn 🙁
Uma maleynayo inay qalad tahay, isla sidaas ayaa loo sheegay 16-ka qaybood.
Sidoo kale, waxaan isticmaalayay 64-bit OS muddo dheer waligeyna wax dhibaato ah igama soo gaadhin iyo inay cunayso RAM badan waa quraafaad.
Ka waran, bayaanka chakra waxay ku sheegaysaa in dhismaha 32-bit ee ISO aan la taageeri doonin, hase yeeshe codsiyada 32-bit weli waa la sii wadi doonaa, (Waxaa jira kuwa badan oo aan xitaa ku jirin nooca 64), tan iyo markii keydka lib32 ayaa sii joogi doona si loo taageero codsiyada adeegsada maktabadahaan.
way fiicantahay, dadka isticmaala badankood waa inay ahaadaan x64
Markaan ka eego asxaabteyda aragtideeda, waxaan ku raacsanahay inay khalad tahay. Waa la wada ogyahay in codsiyada 32-bit ay yihiin kuwa ugu badan uguna dhibta yar.
Laakiin haye, waa tallaabo isbeddelkan qaybinta ah. Waxaan arki doonnaa sida waxaas oo dhami u soo baxaan.
Ma jecli inay ka tagaan dhisme, waxaan u isticmaalaa X86-64 laptop-kayga laakiin Desktop-kayga waa i686 marka hadii wax qaldamaan ma haysto cid aan u soo sheego ... si fiican maahan ... waa inaan la qabsano oo aan aqbalno isbadalada waxaan rajeynayaa inay tahay in la wanaajiyo
Aniguna waxaan doonayay inaan isku dayo ... In kasta oo processor-kaygu (Pentium Dual Core E2140) uu taageero 64 Bits, anigu ma isticmaali doono 64 Bits (+ KDE) oo kaliya 1GB oo RAM ah ayuu isdilayaa ...
Waad ku mahadsantahay faalladaada waxaan helay hadda in processor-kaygu uu taageerayo 64-bit (Pentium Dual Core E5200). Waa nooc qosol badan. Waxaan u maleynayay inay tahay 32-bit maxaa yeelay taasi waxay ku qorneyd Windows markii aan iibsaday PC-ga, tan iyo markaasna waxaan u qaatay si aan u idmo inay taasi ahayd, laakiin wixii aan hadda ka akhriyay waxaan haystay Windows 32-bit maxaa yeelay waxaan heystaa kaliya 2GB wan .
Waa hagaag, waxay u egtahay mid qallafsan, laakiin sida wax badan horay loo sheegay, qofna looma baahna inuu isticmaalo Chakra. U fiirso in xitaa gtk + uusan ugu imaanaynin qaab ahaan qaybinta.
Dhowr usbuuc ka hor waxaan aaday 32-bit sababtoo ah waxaan xoogaa dhibaato ku qabay codsiyada qaar, laakiin waxqabadka guud ahaan hoos ayuu u dhacay waxaanan u maleynayaa inaysan mudneyn in lagu lumiyo awooda processor-ka ee codsiyada qaar (badankood waa lahaansho, sax?). Shalay waa inaan qaabeeyaa kumbuyuutarkeyga waajibaadka xD
Hagaag, way isiiyaan dameerka laakiin sifiican (iga raali noqo): X
Waxay ahayd distro aan jeclaa ka dib markii aan ku dhejiyay netkeyga aniga oo aan wax yar dhididin. Laakiin waxaan qiyaasayaa in wax walba oo wanaagsani dhammaadaan: S
War xun. Uma maleynayo inay hagaajinayaan taageerada nooca 64 bit. Isla dadaalladaas ayaa loo hibeyn doonaa illaa iyo hadda (Waxaan rajeynayaa inaan qaldanahay) waxa kaliya ee isbeddeli doonaana waa inaan mar dambe lahaan doonin nooc 32-bit ah.
Waxaan u maleynayaa inay dhiirigelin weyn u noqon doonto isticmaaleyaasha 32 Bit inay u boodaan Arch oo ay la socdaan KDE
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay, haddii aad rabto inaad isticmaasho 32 jajab, markaa had iyo jeer waxaa jiri doona Arch Linux.
Hagaag, ma fahmin cabashooyinka, waxaan isticmaalaayay 64bits sanado mana aanan la kulmin dhibaatooyin in kabadan hal mar waliba softiweer "shaki leh". Waxaa intaa dheer, distros-yada kale waa inay tusaale qaataan oo ay hagaajiyaan taageerada 64-bit, oo hadda ah tan ugu ballaaran ...
aan ka ahayn dijo
Laakiin chakra ma ahan mid kuxiran kde asal ahaan iyo waxyaabo kafiican? Waxaan ula jeedaa ilaa iyo inta archlinux uu taageerayo i686, wax dhibaato ah ma jiri doonaan.
Ku jawaab notfrombroklyn
Waxay ahayd, waqti fog kahor Chakra waxay go'aansatay inay kaxarto Arch oo noqoto qaybinta madaxbannaan, in kasta oo hawshu aysan wali dhammaystirnayn haddii ay tahay mid horumarsan sida ka muuqata ccr, Tribe iyo horumarka Akabei.
Fikrad xun. Laakiin iyagu waxay go'aansadaan waxa laga yeelayo waxyaabaha ay ku shaqeeyaan, isticmaalayaashu waxay go'aansadaan inay isticmaalayaan iyo in kale. Dhibaatadu maaha inaad tagto ama maaha 64 bit, dhibaatadu waxay tahay mashiinkaagu wuu taageeraa.
Waxaan dareemayaa inay tahay go'aan caqli gal ah, in kastoo dhowr isticmaale ay wali isticmaalaan 32 jajab (kiiskeyga netbook-ga) waa la wada ogyahay in KDE aysan aheyn jawiga ugu fudud ee jira, iyo in 100% waxqabadka ugu wanaagsan ay u baahan tahay ugu yaraan A kumbuyuutar xoogaa hagaagsan (Oh, miyaadan fileynin inaan kugu qarxiyo 512 Ram iyo Processor Mononucleo) Marka la soo koobo, waa talaabo macquul ah oo loo qaaday dhanka horumarka, maadaama la sheegay waqtigooda inay xagjir ahaayeen iyagoo ka fogaanaya ka mid noqoshada maktabadaha gtk + oo eeg sida wanaagsan ee ay wax u qabteen.
/ Waxaan u maleynayaa inay tahay talaabo dhanka saxda ah, waxaan ku raacsanahay qaab dhismeedka 64-bit inuu yahay mustaqbalka oo aanan wax dhibaato ah kala kulmin barnaamijyada, waa wax iska caadi ah in laptop-yada cusub iyo kombiyuutarada ay leeyihiin RAM aad u fara badan iyo processor-rada uu 32-bit dhismaha ku qaadanayo dhammaan kartida.
Max birta dijo
Hagaag, halkii aan sifiican uga caban lahaa, waxaan bilaabay inaan wax ka ogaado, waxaan Chakra 32Bits ku haystay laptop xoogaa duug ah (oo wata processor Celeron), waxaan arkay in xitaa processor-ka hooseeya ee 4 sano ka hor uu taageerayo 64bits, marka, waxaan isla markiiba ku rakibay Chakra 64Bits dhib la’aanna.
Xaalad gaar ah, had iyo jeer waxay noqon doontaa Arch 32Bits.
Jawaab Max Steel
Dhamaan processor-rada waxaa laga dhigay kuwo la jaan qaadaya tiknoolajiyadda 64-bit sannado badan.
Waxay ila tahay go'aan shaki la galinayo….
ka baxsan in barnaamijyada 64-bit ay ka shaqeeyaan si ka wanaagsan barnaamijyada 32-bit ama haddii qaarkood ay bixiyaan dhibaatooyin ka badan kuwa kale
Waxaan ka hadlaynaa dad aad u tiro badan oo gacanta ku haya 32-bit processor-ka oo la dayacay
aragtidayda maahan inaan dhahno xumaan. laakiin waxay siin lahaayeen waxyar oo ogeysiis ah oo dheeraad ah waxayna sugi lahaayeen in yar oo dheer
Waan fahamsanahay go'aanka inkasta oo aanan jeclayn.
Su'aal waa mashiin 2 GB ah sidee ugu shaqeyn lahaa 64 jajab?
Waxaan u arkaa inay tahay wax yar oo walwal ah in mashiinada 5 ama ka yar ama ka yar loo tixgeliyo inay duug yihiin oo aysan u qalmin xitaa taageero, laakiin chakra waa distro leh ilo kooban oo wax badan koray, sidaa darteed waa la fahmi karaa.
si fiican ayey u socotaa, kiiskeyga waligey ma arkin inay ka sarreyso 1.5GB oo RAM ah oo ku yaal OpenSUSE oo leh KDE.
Hadda oo aan u adeegsanayo Mageia 2 Gnome-Shell x86, pc-ga ayaa dareemaya fudeyd leh furanSUSE KDE4 x64
Waxaan haystaa 5-sano jir PC ah wuxuuna si buuxda ugu shaqeeyaa 64-Bit chakra mana cuno wax ka badan 1.5 GB (waxaan haystaa 4) celcelis ahaan barnaamijyada aan isticmaalo maalin kasta.
Gacanta kor u taaga haddii aad haysato processor-ka aan AAN taageerin 64 qaybood.
Waxaan haystaa 1,6 GHz x 2 iyo 1,7GB ram pc oo leh 64-bit tijaabo debian ah iyo qolofta gnome (oo leh dhammaan adeegyada) wayna duulaysaa. Anigana waxaan adeegsaday 64 mashiinno waxoogaa ah oo kaliya 1GB oo RAM ah oo 64 bit ah oo leh gnome 2 oo aan dhibaato lahayn.
Hagaag, ma ogi, cabsidoodu waxay umuuqataa mid aan sal lahayn.
Waxaan hayaa dhowr mishiin oo aan taageerin 64-bit OS. Kuwa taageersanna ma arag horumarin la taaban karo markii la isbarbardhigayo, waxaan kaliya arkay dhibaatooyin cusub. Waxaan u maleynayaa in xaaladdu ay soo hagaagtay oo aan awood u yeelan doono inaan u adeegsado 32-bit codsiyada nidaamka 64-bit aniga oo aan maskaxdayda ka jebin ku tiirsanaanta. Ama waxaa laga yaabaa inaysan muhiim ahayn maxaa yeelay dhammaan codsiyada 32-bit waxay leeyihiin 64-bit u dhigma. Waqti badan ayey ahayd tan iyo markii aan isku dayey 64-bit GNU / Linux, si kasta oo aan ulayaabey ayaan ulayaabay.
Dhinaca kale, uma maleynayo in Samsung NB30-kayga uu la duulayo 64-bit Chakra ah. Waxaan ku hubin doonaa sawirka soo socda.
Albert teixdor dijo
Ma ahan aniga, iyo sanado in dhammaan processor-yada, xitaa kuwa netbook, ay taageeraan 64 jajab, kombiyuutarrada duugga ah, waxaa jira qaybsiyo badan oo diyaarsan.
Jawaab Albert teixidor
Sikastaba waligey kuma rakibo karin saxaradaas sidaas darteed waxaan isticmaalaa debian
Ku jawaab xtremox
Roberto Firfircoon Santana dijo
Waa macquul, waa inay dhacdaa si dhakhso ah ama goor dambe.
Tiknoolajiyadda ayaa waqtigeedii duugoobi doonaa.
Sidoo kale, waa wax iska caadi ah koox aad u tiro badan oo horumariyayaal ah. Waa culeys aad u badan.
Si tartiib tartiib ah kuwa kale ayaa u raaci doona.
Jawaab Roberto Evolucionando Santana
Aniga ahaan waa qalad weyn waxaanan isticmaalaa 32 iyo 64 jajab.
Ubuntu waa la dhaleeceeyay wax badan sababtoo ah midnimadeedu waxay ku xadideysaa dadka isticmaala kombuyuutarradii hore sababtoo ah isticmaalka badan ee kheyraadka iyo chakra waxay sameysaa wax ka sii xun.
Marka la soo koobo, chakra-kan dhammaadka kama badna mid keliya.
Ma garanayo wax ay ii sheegaan inay ku dhufan doonaan dharbaaxo culus.
Fikrad ahaan, kuwa isticmaala chakra ee leh 64 koox iyo 32 nidaam, waxay aadi karaan 64 si raaxo leh iyadoon dib loo raacin nidaamka oo dhan
waan ka xumahay waan tijaabinayay hadii HTML code wali shaqeynayo
Gacanta ayaan taagay !!!
Waxaan hayaa kumbuyuutar kumbuyuutar ah, 'Dell Gx260' in ka badan toban sano ka hor,
nidaam 32-bit ah, p4 3.0 Ghz, 2 gb wan, 2 dd of 120 gb, iyo agp graphics nvidia geforce 5200 oo leh 128 wan (waxay lashaqeysaa darawalada nouveau), waxaanan leeyahay gacaliyahayga qaaliga ah wajiyada xfce iyo kde, dabcan goos gooskan ugu dambeeya ee aagga saameynta sawirada (iyo sidoo kale deactivating nepomuk iyo akonadi, maxaa yeelay hadii processor-ku uu dhididaa kuwan), laakiin waxaan ku rakibey si aan u tijaabiyo naftayda, faa'iidooyinka inta ka hadal kde.
Ku jawaab bitblue
Kuwa leh 32 qaybood waxaa macquul ah in loo gudbiyo manjaro sidoo kale waxay ku saleysan tahay Arch http://blog.manjaro.org/.
PS Weli waan ku faraxsanahay nolosha Chakra 🙂
Waxaan doonayaa inaan hubiyo nooca xfce ee distoorkaas.
Tani macnaheedu maahan inaan awoodi doonin inaan ku rakibo Chakra 32bit dhisme kaliya 64bit? Waan shiilay markaa !! 🙁
Warshadaha kombuyuutarku waa kuwo aan kala joogsi lahayn oo si joogto ah u socda, kana tagaya tiknoolajiyada duugoobay ee waxyeelleeya ama dhinac iska dhiga. Waxaan rajeyneynaa in ka beddelka 32-bit ilaa 64-bit ay qaadan doonto waqti dheer in dadku awood u yeeshaan inay kooxaha beddelaan.
Ujawaab Mr Linux.
sifiican .. waa talaabo macquul ah oo dad badani aysan ku dhicin inay sameeyaan
Xitaa P4 waxay taageertaa 64 qaybood. Marwalba waan isticmaali jiray x86_64 distros waligana dhib malahan. Qeybinta badankood waxaa ka mid ah 32-bit maktabado si ay ugu shaqeeyaan 32-bit oo keliya barnaamijyada 64-bit architecture-ka.
Waa inaad xusuusnaataa haddii aad haysatid processor-ka 64-bit ah, nidaamkaaga oo dhan waxaa loo dhisay inuu taa taageero. Micnaheedu maaha inay cunayso xusuus badan ama inay kaliya u adeegayso wax ka qabashada RAM badan, waa nidaamka guud ahaan; dhammaan qalabka iyo softiweerka ka shaqeeya dhismahaas, sidaa darteed waxaad khasaarineysaa oo keliya lacagtii aad ku bixisay qalabka kombiyuutarka adigoon isticmaalin barnaamijyada qaab dhismeedka habboon.
Waxay ila tahay go'aan caqli badan. Sidoo kale, si dhib yar uma rabto inaad ku maamusho Chakra processor i686, qalabkii hore waxaa jira waxyaabo kale oo ka wanaagsan.
Dhowr sano ka hor waxaan ku sameeyay tijaabinta waxqabadka kumbuyuutarka kumbuyuutar ay la socdaan processor-ka AMD Athlon 64 X2 iyo 64-bit OS-ka wuu ka gaabiyay 32-bit (wuxuuna qaatay RAM badan). Markaa waxa adiga kugu saabsan ee aad lacagtaada ku khasaarinayso adoo adeegsanaya 32 jajab waa uun weedho aan micno lahayn. Dadku uma isticmaalaan 32-bit sababtoo ah. Inaad lacag lumiso waa inaad isticmaasho wax ka sii xumaanaya. Tiknoolajiyada 64-bit waa bislaaneysaa laakiin waqti aan fogeyn kahor aad bay cagaar u ahayd.
Chakras waxay sameeyeen go'aan wanaagsan aragtidooda. Waxay diiradda saaraan qaab dhismeedka iyo jawiga desktop-ka si ay u gaaraan tayada ugu sarreysa ee suurtogalka ah ilaha ay haystaan. Laakiin taasi weli waa war xun oo u ah isticmaaleyaal badan. Nasiib wanaagse waxaa jira waxyaabo kale.
Waxaan hayaa (AMD Athlon (tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+) oo sifiican ayuu ula shaqeeyaa 64Bits chakra iyo isticmaalka xasuusta ayaa la mid ahaa, waxaan u idhaahdaa arintaan inaanan kaa hor imaan ama aan dood ka kicin. Waxay ahayd tijaabo aan sameeyay si aan u arko nooca aan haysto, sidoo kale waxaan horay isugu dayay ubuntu 11.04 iyo kubuntu 11.10 oo leh natiijo la mid ah inta udhaxeysa 32 iyo 64.
Hagaag arag tan si aad u aragto waxa aad u malaynayso
Nab nabad dijo
Mudane. Waan jeclahay Chakra laakiin waxaan dhibaato ku qabaa batteriga xusuus qorka (Toshiba Satellite L645) ma aqoonsana, hadii uu jiro qof aqoon u leh sida loo xaliyo dhibaatadan, fadlan i caawi. Mahadsanid.
Ku jawaab Ben Paz
Xaqiiqdii, OS-kan waligiis waxtar uma yeelan doono shirkadaha, ganacsiyada iyo iskuulada, maadaama 64-bit pc aysan daruuri ahayn in lala shaqeeyo USB ama dekedda Parallel si loo xakameeyo mashiinka habka warshadaha, aadna uga yar in la isticmaalo xaashiyaha ama processor-ka. qoraalka. waa badan tahay, xitaa ma ahan isticmaalka gudaha si loo soo saaro filim HD ah.
Dabcan, processor-ka 64-bit wuxuu ka dheereeyaa processor 32-bit ah, laakiin runti ma ka faa’iideysaneysaa, ma loo baahan yahay dhammaan adeegsiga PC-ga? Aniga ahaan waa suuq nadiif ah, waxaan u maleynayaa inay tahay inay sii wado soo saarida processor-ka tiknoolajiyada kaladuwan si markaa ay u helaan qiime kala duwan dhamaan baahiyaha iyo isticmaalka.
Ku jawaab sagaal
Sida loogu adeegsan karo kombiyuutarada hore qalab bilaash ah
Slitaz RazorQT: Dhadhanka cusub ee Slitaz oo leh Qt